Villa Somalia oo war kasoo saartay diyaradaha drone ee la sheegay inay siisay Turkey | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Villa Somalia oo war kasoo saartay diyaradaha drone ee la sheegay inay...
Villa Somalia oo war kasoo saartay diyaradaha drone ee la sheegay inay siisay Turkey
Muqdisho (Dalkaan.com) – Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa beenisay inay Turkiga weydiisatay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee nooca Drones-ka ah.
Agaasimaha warfaafinta ee Villa Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo wareysi gaar ah siiyey laanta afka Soomaaliga ah ee BBC-da ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in Turkiga uu Soomaaliya siinayo diyaarado dagaal, kadib markii warar sheegaya lagu baahiyey baraha ay bulshada ku wada xariirto ee Internet-ka.
“Maya, anigu kuu xaqiijin maayo taas, warkaasna ma jiro,” ayuu yiri Cabdirashiid Maxamed Xaashi.
Agaasimaha ayaa sidoo kale xusay in kulankii ay yeesheen Madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya iyo Turkiga kaliya looga hadlay arrimaha amniga iyo xoojinta taageerada ay xukuumadda Ankara siiso mida Muqdisho.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in Turkiga uu Soomaaliya ka caawinayo dib u dhiska ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Turkiga ayaa ah dal saaxib dhow la ah Soomaaliya, wuxuuna ka caawiyaa arrimaha ciidamada iyo sidoo kale bani’aadanimada.
Si kastaba, hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday uu ku sugan yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, halkaas oo uu uga qeyb-galay shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika, isaga oo madasha ka sheegay fursadaha iskaashi iyo maalgashi ee yaalla Soomaaliya.
Cumar Cabdirashiid oo weerar culus ku qaaday madax goboleedyada dalka
Wararkii ugu dmabeeyey ee loolanka doorashada guddoomiyaha Guddiga Xallinta Khilaafaadka
Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo shaaciyey jadwalka doorashada kuraas ka mid ah BF
Wasiir ka tirsanaa xukuumadii Kheyre oo shaaciyey sababta fashilisay wada-hadalladii DF Soomaaliya iyo Somaliland?
Axmed Madoobe ma ku abaal-dhacay Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif?
Daawo: Xuud oo shaaciyey qorshe aan horey loo ogeyn oo Muqdisho uu u yimid
Waa kuma Fahad Yasin. Muxuu wajihi karaa 48 saac kadib. Ma...
Jamie Vardy oo la sheegay in uu garoomada ka maqnaan doono...
Guddigii loo saaray dhulka ciidamada badda oo go’aan garaay balse la...
Thomas Tuchel oo ka hadlay bar-barihii Kooxdiisa kala kulantay Wolves
Kadib qabsashada degmada MATABAAN, Al-Shabaab oo qaraxyo ku burburiyey…
Xavi ayaa yidhi: “Ousmane Dembele waa la iibin doonaa bisha Janaayo...
Daawo: Gabadhii ’15 jirka aheyd’ ee kursigii la diiday kula tartantay...